प्रचण्ड र विक्रम पाण्डेमा को बलियो ? यस्तो छ हिसाव किताव
चितवन, २ मंसिर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेका चितवन क्षेत्र नं ३ मा वामपन्थी गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताको प्रतिस्पार्धाले यहाँका निर्वाचन रोमाञ्चक बन्दै गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का उपाध्यक्ष एवं वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डे बीचको मुख्य प्रतिस्पर्धाका कारण चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ अहिले सबैको ध्यान तानेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा दुई प्रमुख ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को आफ्नो उम्मेदवार भन्ने यहाँ छैन । प्रचण्ड नेकपा एमाले र पाण्डे नेपाली काँग्रेसको मतको आशमा निर्वाचन जित्ने दाबीका साथ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यही क्षेत्रमा गाभिएको यस अघिको क्षेत्र नं– ५ बाट गएको संविधानसभा निर्वाचनमा पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको थियो । दाहाल पहिलो पटक यहाँबाट निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको प्रमुख सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । सँगै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीसँगै साना नदीहरुले यहाँको सौन्दर्यता बढाएका छन् । नदी आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बन्ने क्रममा रहेका छन् । राप्ती किनारको पटिहानी, जगतपुर र मेघौली क्षेत्रमा पर्यटकीय होटल रहेका छन् ।
यही क्षेत्रको माडी र मेघौलीमा होमस्टेबाट पर्यटन प्रबद्र्धन गरिँदै आएको छ । निकुञ्जसँगै गोद्धक, छरछरे, पाँच पाण्डव, बैकुण्ठे, विक्रम बाबा, सोमेश्वर कालिकालगायतका धार्मिकस्थल पनि यही क्षेत्रमा रहेका छन् । यस क्षेत्रका मध्यवर्ती सामुदायिक वन पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि उर्वर मानिन्छन् । कृषि शिक्षाका लागि रामपुरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रहेको छ ।
गाई अनुसन्धान फार्म, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, मेघौली विमानस्थल र यस क्षेत्रमा निर्मित पोल्ट्री फार्म र दाना उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायकका छन् । विकासका दृष्टिले पछि परेको सडक कालोपत्रे भएका छैनन् । नदी तटबन्धनको अभावमा वर्षेनी यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेकोे छ । पश्चिम चितवनबाट नवलपरासी जोड्न पुल बन्नसकेका छैन । जिल्लाको भू–भाग भएर पनि नवलपरासी हुँदै वाल्मिकी आश्रम पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
माडी क्षेत्र चुरे पहाडको फेदको समथर भू–भाग हो । भरतपुर महानगरतर्फ पूरै समथर भू–भाग हो । माडी क्षेत्रमा थारु जातीको बाहुल्यता छ भने भरतपुरतर्फ मिश्रित बसोवास रहेको छ । यहाँ देशका ७६ जिल्लाबाट मानिस बसाइँसराइ गरी आएका छन् । जनताका यस्ता समस्या रहँदै गर्दा यहाँका उम्मेदवारले ठूला पूर्वाधारका आश्वासन दिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले “राष्ट्रको विकासका लागि प्रचण्ड, चितवनको विकासका लागि “प्रचण्ड” भन्ने नारासाथ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ ।
समृद्ध राष्ट्र र समृद्ध चितवनको पक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उहाँको भनाइ छ । निकुञ्ज वारपार गर्न आकासे पुल वा भूमिगत सडक निर्माण गर्ने, निकुञ्जवारी र पारी रिङरोड बनाउने र यस क्षेत्रलाई युरोपका देशका शहरको तुलनामा लैजाने योजना उहाँको छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मन्त्री पाण्डे “विकासका लागि विक्रम पाण्डे” भन्ने नारा दिनुभएको छ । माडीमा चक्रपथ निर्माण, निकुञ्जमा मेस जाली लगाएर वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने, पश्चिम चितवनबाट नवलपरासी जोड्ने पुल, नदी नियन्त्रण, सडक कालोपत्रे र सिँचाइ जस्ता एजेण्डा उहाँले अघि सार्नुभएको छ ।
सो क्षेत्रको (क) प्रदेशबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार दिनेश कोइरालाले “ सबल लोकतन्त्रका लागि हातेमालो, विकास निर्माण र समृद्धि अवको पालो” नारा दिनुभएको छ । उहाँसँगै वाम गठबन्धनबाट एमालेका कृष्णप्रसाद भूर्तेल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष भूर्तेलको एजेण्डा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुरहेको छ ।
प्रदेश (ख) का लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट काँग्रेसका साजनकुमार महतो र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका रामलाल महतो चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यो थारु बाहुल्य क्षेत्र हो । दुवैको चुनावी नारा थारु संस्कृतिको संवद्र्धन र पर्यटन विकास छ । क्षेत्र नं ३ मा ६ स्वतन्त्र र ८ दलका गरी १४ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । नेपाल दलित पार्टीका डिलबहादुर विक, विवेकशील पार्टीका सरदराज पाठक, संघीय समाजवादी फोरमका अजय ठाकुर हजाम, नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका टंकनाथ रेग्मी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरिप्रसाद दुलाल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यसैगरी स्वतन्त्रबाट प्रवेश अधिकारी, विजयराज घिमिरे, भरत बोहरा, टंक बास्तोला, हरिप्रसाद दाहाल र भगवती प्रसाईंको उम्मेदवारी छ ।
यस क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाका २९ मध्ये १९ र माडी नगरपालिकाका सबै वडा पर्दछन् । माडीका चार गाविस मिलेर माडी नगरपालिका बनेको हो । भरतपुर उपमहानगरपालिकामा यस अघि नारायणी र चितवन नगरपालिका गाभिएर महानगर बनेको हो । पछि थपिएका दुवै नगरपालिका क्षेत्र नं ३ मा पर्दछन् । भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नं ६, ८, ९ तथा १३ देखि २८ नम्बरसम्मका वडा क्षेत्र नं ३ मा पर्छ । जसमध्ये क्षेत्र नं. ३ को (क) मा भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नंं ६, ८, ९, १५ देखि २० सम्म, २६, २७, २८ पर्दछ भने (ख) मा भरतपुर महानगरपालिकाका १३, १४, २१, २२, २३, २४, २५ र माडी नगरपालिकाका सबै वडा पर्दछन् ।
यो क्षेत्रमा एक लाख २५ हजार ८२३ मतदाता छन् । जसमा महिला ६६ हजार २७० र पुरुष ५९ हजार ५५३ रहेका छन् । क्षेत्र नं ३ को (क) को मतदाता ६८ हजार ३६२ छ । जसमा महिला ३६ हजार ३०६ र पुरुष ३२ हजार ५६ छन् । सोही क्षेत्रको (ख) मा ५७ हजार ४६१ मतदाता छन् । जसमा महिला २९ हजार ९६४ र पुरुष २७ हजार ४९७ रहेका छन् । जिल्लामा कूल मतदाता तीन लाख ५४ हजार ३६ रहेको छ । जसमा एकजना तेस्रोलिंगी पनि छन् । कार्यालयका अनुसार एक लाख ८४ हजार ६८ जना महिला र एक लाख ६९ हजार ९६७ जना पुरुष मतदाता छन् ।
निर्वाचनका लागि क्षेत्र नं ३ मा ६२ मतदानस्थल तय गरिएको छ जहाँ १४९ मतदान केन्द्र रहेका छन् । जिल्लामा १६१ मतदान स्थलमा ४०८ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।